Thursday November 19, 2020 - 09:13:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad ka dhacday xuduud beenaadka ayaa dib loogu furay marinka Carcar kaasi oo xirnaa wax ka badan 30 sano. isweydaarsi dhanka ganacsiga iyo macluumaadka dhanka amniga ah ayay ku heshiiyeen Aala sacuud iyo xukuumadda Shiicadu ku badantahay ee kajirta wadanka Ciraaq.
Sacuudi Carabiya ayaa xiriirka u jartay taliskii Saddam Xuseen kadib duulaankii uu ku qaaday dalka Kuweyt 1990kii balse xiriirka dhinacyadan ayaa dib usoo noqday sanadkii 2017 balse xiriirkaas ayaan gaarsiisnayn in dhinacyadu isku furaan xuduud beenaadyada illaa shalay oo ay fureen macbarka kaliya ee isku xira.
Wufuud isugu jiray guddoomiyayaal gobol, saraakiil sirdoon iyo wasiirro ayay labada dhinac isdhaafsadeen, iskaashiyada dhaxmaraya Aala sacuud iyo Shiicada Ciraaq waxaa kamid ah arrimaha horumarinta beeraha,ganacsiga, warshadaha iyo iskaashiga amniga sida lagu sheegay bayaan wadajir ah oo kasoo baxay labada dowladood.
Wadanka Ciraaq waxaa awood siyaasadeed iyo mid melleteri ku leh iiraan oo xurguf siyaasadeed ay kala dhaxayso Sacuudiga iyo xulufadiisa waxaana lays weydiinayaa sida xukuumadda Baqdaad ay isugu wadi karto labadaan dowladeed ee isdiiddan.